Top 6 Thỏi son màu đỏ đất đẹp nhất hiện nay đốn tim các nàng | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 6 Thỏi son màu đỏ đất đẹp nhất hiện nay đốn tim các nàng | Muasalebang in Muasalebang
I-Lipstick ingenye yezinto ezibalulekile zokwakheka kwabalandeli bobuhle banamuhla. Lo mugqa womkhiqizo usiza ukwengeza ubusha futhi uthuthukise ukuthandeka kwezindebe zomsebenzisi. Emakethe namuhla, kunemigqa eminingi ye-lipstick enemikhiqizo ehlukene nemibala. Ikakhulukazi, umugqa kufanele ukhulunywe umhlaba obomvu lipstick “ihlasela” umphakathi wobuhle. Ake sithole kanye nathi ukuze sithole i-lipstick ebomvu yomhlaba ephezulu engu-6+ enhle kunazo zonke esihlokweni esingezansi.
1 Iyini i-lipstick ebomvu yomhlaba?
2 Isiphi isikhumba esibomvu somhlaba?
2.1 I-lipstick ebomvu yomhlaba ifanele isikhumba esimhlophe
2.2 I-lipstick ebomvu enomhlaba ifanele isikhumba esimnyama
2.3 I-lipstick ebomvu yomhlaba ifanele isikhumba esiphuzi
3 Izindebe zomlomo ezibomvu zomhlaba eziphezulu ezingu-6+ ezishisa kakhulu ziyaziwa njengamanje
3.1 1. I-Red Lipstick Inhlabathi Utshani Oluthambile
3.2 2. I-Black Rouge lipstick ebomvu bomhlaba i-A12
3.3 3. 3CE Daffodil I-Lipstick Ebomvu Yomhlaba
3.4 4. I-BBIA Last Velvet Lip Tint Version 5 umbala 25
3.5 5. MAC lipstick umhlaba obomvu MAC Russian Red
3.6 6. V6 .i-lipstick ebomvu yomhlaba uMerzy
3.7 7. I-Dior Addict Lip Tattoo 541 Yemvelo I-Sienna Ebomvu Umhlaba
Iyini i-lipstick ebomvu yomhlaba?
I-lipstick ebomvu yomhlaba iyinhlanganisela evumelanayo phakathi kwamathoni amabili ensundu yomhlaba kanye nokubomvu okumsulwa. Ngale nhlanganisela yombala, kusiza ukwakha umbala omusha, osemfashinini futhi osesitayeleni ngokwedlulele we-lipstick. Ngakho-ke, bonke abesifazane, ikakhulukazi abalandeli be-makeup, ngokuqinisekile ngeke bakwazi ukumelana nokukhangwa kwalo mbala obomvu we-lipstick.
Isiphi isikhumba esibomvu somhlaba?
Abasebenzisi abaningi manje bayazibuza umhlaba obomvu lipstick Ifanela muphi umbala wesikhumba? I-lipstick ebomvu yoMhlaba iyithoni yesikhumba ejulile kodwa engakhethi futhi ifanele lezi zinhlobo zesikhumba ezilandelayo:
I-lipstick ebomvu yomhlaba ifanele isikhumba esimhlophe
Kulabo abanesikhumba esimhlophe, bangasebenzisa ngokuzethemba noma yimuphi umbala we-lipstick nobomvu nawo angasetshenziswa. Ngalelipstick ebomvu yomhlaba, izogqamisa isikhumba esimhlophe, yenze izindebe zigcwale, zigcwale futhi zithandeke. Ngesikhathi esifanayo, asikho isidingo sokugqoka izimonyo eziningi, ukusebenzisa nje i-lipstick ebomvu ekhanyayo kwanele ukuba ibe yinhle futhi iqiniseke.
I-lipstick ebomvu enomhlaba ifanele isikhumba esimnyama
Emantombazaneni anesikhumba esimnyama, ikhekhe lezinyosi ngokuvamile linamahloni ekukhetheni i-lipstick ongayisebenzisa. Kodwa-ke, uma uthanda le lipstick ebomvu yomhlaba, ungakhetha ngokukhululekile ukuyisebenzisa. Ngoba lo mbala omusha obomvu womhlaba uzosiza abasebenzisi abasha ukuba babe ngabanethezeka futhi bahehe. Ikakhulukazi, uma ungeza ukwakheka okuncane nge-eyeshadow yethoni efanayo, kuzokwenza ubuso bonke bube buhle futhi buhluke.
I-lipstick ebomvu yomhlaba ifanele isikhumba esiphuzi
Isikhumba esiphuzi siwumbala wesikhumba amantombazane amaningi ase-East Asia angabanikazi futhi lo mbala wesikhumba ufanelekile nemibala eminingi ehlukene ye-lipstick. Ngakho-ke, amantombazane akudingeki abe nekhanda elibuhlungu kakhulu ukuze akhethe umbala we-lipstick ongawusebenzisa. Ikakhulukazi ngombala obomvu we-lipstick uzoletha charm, freshness kanye nempilo. Ngesikhathi esifanayo, ayenzi umbala wesikhumba i-sine, okwenza ubuso bubukeke bugqamile uma busetshenziswa.
Izindebe zomlomo ezibomvu zomhlaba eziphezulu ezingu-6+ ezishisa kakhulu ziyaziwa njengamanje
Emakethe namuhla, kunemibala eminingi ebomvu ye-lipstick evela kumikhiqizo ehlukene. Ngakho-ke, ukukusiza ukuba ukhethe ngokukhululekile umugqa wakho we-lipstick owuthandayo futhi ofanele wena. Ake sibhekisele kuma-ingots aphezulu angu-6+ umhlaba obomvu lipstick Ezishisa kakhulu nezidume kakhulu njengamanje yilezi:
1. I-Red Lipstick Inhlabathi Utshani Oluthambile
I-Co Soft brand yezimonyo yemvelo ithenjwa abesifazane abaningi ngefilosofi yebhizinisi ethi “Impilo Neqiniso”. Iqoqo le-Natural Pearl lipstick liphinde libe ngumkhiqizo oshisekayo weqembu losokhemisi bakwa-Co Soft abafuna ukufaka amakhemikhali ayingozi esikhundleni sezithako zemvelo eziphephile emikhiqizweni yobuhle.
I-lipstick ebomvu yomhlabathi enguNombolo 22 inombala obomvu obusha osemusha ongomunye wemibala yomhlaba edayiswa kakhulu ye-Soft Grass. Amantombazane akhathele umugqa osindayo we-lipstick, okwenza izindebe zome, khona-ke lokhu kuyi-lipstick yangempela kuye.
I-Pearl lipstick ithambile, ibushelelezi, inothile ngezinto zokuthambisa zemvelo ngaphandle kokukhanya.
Awekho ama-preservatives, amakha okwenziwa: Iphephile ezindebeni ezizwelayo.
Ayinamthofu, kodwa amandla okunamathela embala angafika ngaphezu kwamahora angu-5 ngenxa yombala wemvelo wamaminerali agayiwe kakhulu.
Ama-moisturizer engeziwe avela kuwoyela wembewu ye-apula, uwoyela we-alimondi, uwoyela we-rice bran, uvithamini E.
I-lipstick inedizayini yangaphandle emhlophe e-pearl enekepisi lesimanjemanje.
I-Lipstick iyinto ebaluleke kakhulu kunoma iyiphi intombazane. Ngakho-ke, i-Ngoc lipstick ephephile futhi ejwayelekile enombala obomvu womhlaba owanelisayo iyisinqumo esihle samantombazane.
Intengo: 290,000 VND / ingot
2. I-Black Rouge lipstick ebomvu bomhlaba i-A12
Uma ufuna i-matte lipstick ebomvu enamathela kahle kodwa engomisi izindebe zakho futhi idale umphumela ocwebezelayo, i-Black Rouge A12 yomhlaba ebomvu lipstick izoba yisinqumo esihle kuwe. Lona umugqa we-lipstick obomvu wohlobo oludumile lwe-Black Rouge. Le lipstick inenhlanganisela ye-tint kanye ne-matte lipstick ehlinzeka nge-lipstick ebushelelezi, ekhanyayo enokugcina umbala omuhle kanye nomswakama omuhle.
Izithako eziyinhloko ze I-Black Rouge A12 i-lipstick ebomvu yomhlaba Lo mkhiqizo uhlanganisa i-Dimethicone, i-Glycerin ne-Mica powder, njll. Ngale ndlela usiza i-lipstick ukuthi ibe nesiphetho esihle se-matte futhi ihlale isikhathi eside, i-lipstick nayo iba thambile futhi ibushelelezi uma isetshenziswa. Ngaso leso sikhathi, le lipstick ye-A12 iphinde ithambisa izindebe ukuze isize izindebe zihlale zikhanga futhi zithambe usuku lonke.
Ngaphezu kwalokho, i-Black Rouge A12 lipstick ebomvu inomklamo ojwayelekile wesikwele we-lipstick womkhiqizo weBlack Rouge. Ikepisi le-lipstick linombala onsomi okhanyayo onokunethezeka, omuhle futhi okulula ukuwuphatha. Ikakhulukazi, le lipstick inebhulashi elimise okweqabunga elisiza ukukhipha inani elifanele le-lipstick ngaphandle kokulahlekelwa lipstick futhi yenza kube lula ukufaka i-lipstick ezindebeni.
Intengo yesithenjwa: 240,000 VND/ibha
3. 3CE Daffodil I-Lipstick Ebomvu Yomhlaba
Lona omunye wemigqa ebomvu ye-lipstick eshisayo edumile namuhla. Le lipstick ye-Daffodil yomhlaba ebomvu engu-3CE ingeyohlobo oludumile lwe-3CE oluvela eKorea. Le lipstick iyingxenye yomugqa we-3CE we-Velvet Lip Tint we-lipstick enombala obomvu womhlaba – I-Daffodil “ithrendayo” kakhulu.
I-Daffodil 3CE I-lipstick ebomvu yomhlaba inomklamo olula, ohlangene nomzimba omude we-lipstick wesiginesha yomkhiqizo. Umuzwa lapho umkhiqizo udingeka uqinile futhi isikhathi ngasinye lapho uvulwa futhi uvaliwe, awukhululekile. Umklamo ufana nombala we-lipstick, elula futhi kulula ukuwuthwala lapho uhamba noma uphuma.
Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwale 3CE Daffodil earth red lipstick kuqukethe amafutha asiza ukugcina izindebe zicwebezela. Ngesikhathi esifanayo, akukho umuzwa wezindebe ezomile noma ukungakhululeki lapho usebenzisa. Le lipstick futhi inamandla ombala ojwayelekile, i-lipstick encane futhi ehlala isikhathi eside engasetshenziswa ngokuphepha phakathi kwamahora angu-4-5 ngaphandle kokuphinda usebenzise i-lipstick.
Intengo yesithenjwa: 360,000 VND/ibha
4. I-BBIA Last Velvet Lip Tint Version 5 umbala 25
Lona umugqa umhlaba obomvu lipstick ingeyeqoqo le-BBIA Last Velvet Lip Tint Version 5. Le lipstick yomhlaba ebomvu ye-BBIA selokhu yethulwa yaziswa futhi yathandwa abalandeli abaningi bobuhle. Le lipstick enombala obomvu wenhlabathi iyayenga futhi iheha wonke umuntu oseduze lapho uyisebenzisa. Umbala we-lipstick womkhiqizo ubomvu kancane, ngakho awenzi umsebenzisi abukeke emdala kakhulu futhi ulungele izinhlobo eziningi zesikhumba.
Izithako eziyinhloko ze-BBIA Last Velvet Lip Tint Version 5 – umbala 25 zifaka i-Dimethicone, i-Propylene Glycol, i-Isododecane, i-Synthetic Fluorphlogopite. Ngalezi zithako, kusiza ukukhulisa i-matte nokushelela kwe-lipstick. Ngesikhathi esifanayo, kuyasiza futhi ukuthambisa, ukunikeza umswakama odingekayo ezindebeni ukuze usize izindebe zibukeke zigcwele impilo futhi zingazizwa zomile lapho zisetshenziswa.
Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo unomklamo wesimanjemanje futhi kanokusho kusukela kukesi le-lipstick kuya kusikepisi se-lipstick. Umzimba we-lipstick wenziwe ngepulasitiki ekhanyayo yekhwalithi ephezulu ukuze ukwazi ukubona umbala we-lipstick ngaphakathi. Ngaleyo ndlela ikusiza ukuthi ubone ukuthi ingakanani i-lipstick esele futhi kulula ukuyisebenzisa.
Intengo yesithenjwa: 140,000 VND/ibha
5. MAC lipstick umhlaba obomvu MAC Russian Red
I-MAC Russian Red ingenye ye-MAC lipstick ebomvu yomhlaba ebukekayo engenakuphuthelwa eqoqweni labesifazane. Lo mkhiqizo unomklamo omise okwenhlamvu ngepulasitiki yangaphandle emnyama ene-emulsion encane yesiliva. Ngesikhathi esifanayo, inosayizi ohlangene kanye nekhono lokujika phezulu naphansi kalula nangokushelela, kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Le lipstick enomhlaba ebomvu ye-MAC ingeyomugqa we-retro matte lipstick one-matte lipstick kodwa hhayi izindebe eziyimpuphu nezindebe ezomile. Uma usebenzisa i-lipstick ekhanyayo ezindebeni, ayisusi ama-lip grooves futhi ayizwa sengathi izindebe ziqinile noma zinamathele. Lo mkhiqizo une-lipstick ebomvu ehlaba umxhwele esiza ukugqamisa izindebe, okwenza ubuso buthandeke, bugcwele futhi buthandeke. Ngasikhathi sinye, lo mbala we-lipstick ulungele zonke izikhathi njengokuphuma, ukuya emsebenzini, iphathi, …
Ngaphezu kwalokho, lo mkhiqizo unenzuzo yombala evamile engu-85-95% kuye ngombala womlomo womsebenzisi ngamunye. Ikhono lokunamathela kumbala wale MAC Russian Red lipstick nayo yinde kakhulu futhi ayinamatheli ezinkomishini lapho udla futhi uphuza. Umkhiqizo unokunambitheka okumnandi kwe-vanilla, kumnandi futhi kufanelekile kubo bonke abasebenzisi.
Intengo yesithenjwa: 520,000 VND/ibha
6. V6 .i-lipstick ebomvu yomhlaba uMerzy
Lona umugqa wemikhiqizo ebomvu ye-Merzy lipstick eyaziswa futhi ethandwa abasebenzisi abaningi namuhla. Le lipstick iyingxenye yeqoqo le-Merzy Another Me The First Velvet Tint ene-lipstick e-matte e-creamy, engajiyeki kakhulu futhi eminyene, ukuxutshwa kalula ezindebeni. Ngesikhathi esifanayo, akubangeli umuzwa wokoma ezindebeni, ushiye ungqimba olubushelelezi lwe-lipstick, ngaphandle kokudalula izindebe zomlomo noma izikali zomlomo lapho zisetshenziswa.
Mayelana nomklamo I-V6 Merzy lipstick ebomvu Le lipstick inengxenye yebhamuza elimnyama-mpunga, amagama athi “Merzy” enziwe akhanye ukuze ukwazi ukubona umbala we-lipstick ngaphakathi. Ngasikhathi sinye, ithiphu lebhulashi lomkhiqizo liboshwe ukuze kube lula ukusebenzisa i-lipstick lapho usebenzisa.
Ngaphezu kwalokho, le lipstick ebomvu ye-Merzy yomhlaba, nakuba i-matte cream, iqukethe izakhi eziningi, ngakho-ke kusiza ukunakekela kahle izindebe, ukunikeza umswakama ophumelelayo. Ngesikhathi esifanayo, ikhono lombala i-lipstick lihle kakhulu, umbala ungokwemvelo, umnene futhi uyiqiniso. Ngaleyo ndlela kusiza izindebe zomsebenzisi ukuthi zithandeke, ziphuphume futhi zifanele zonke izinhlobo zesikhumba.
7. I-Dior Addict Lip Tattoo 541 Yemvelo I-Sienna Ebomvu Umhlaba
Lona umugqa we-high-end cream lipstick ovela kumkhiqizo odumile we-Dior waseFrance. Le lipstick ye-Dior ebomvu yomhlaba inomklamo wegobolondo lepulasitiki lerabha eliqinile eliqinile ngendlela yezikwele, ngenhla.
phrinta igama lomugqa we-lipstick ngezinhlamvu zesiliva eziheha iso. Igobolondo ngokuvamile lizobonisa umbala we-lipstick ngaphakathi, okwenza kube lula ukubona umbala we-lipstick. Iphoyinti lebhulashi le-lipstick lincane futhi lincane, line-bevel encane ukwenza kube lula ukuvala umugqa womlomo.
Le Dior Addict Lip Tattoo 541 Natural Sienna enethoni ebomvu yomhlaba ingenye yemibala edume kakhulu ye-lipstick namuhla. I-lipstick iyinhlanganisela yobubomvu obusawolintshi obuxutshwe nokunsundu kancane. Ngaleyo ndlela ingakwenzi kukhanye kakhulu, kugqanyiswe izinkinga ezidala ukugqama kubasebenzisi. Ngesikhathi esifanayo ukudala ebukhali, ekhangayo futhi efanelekayo zonke izinhlobo zesikhumba.
Ngaphezu kwalokho, le lipstick ebomvu yomhlaba inokwakheka okufana ne-tint, i-lipstick ithambile futhi ibushelelezi ezindebeni zomlomo, ithatha ngokushesha, ihlala isikhathi eside futhi ayizwakali yomile ezindebeni. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo usebenza futhi ubuchwepheshe bokudaya izindebe ukuletha ungqimba oluphelele, oluncane nolulula lwe-matte lipstick futhi unikeze izindebe zemvelo umuzwa wokungasebenzisi i-lipstick.
Intengo yesithenjwa: 850,000 VND/piece
Ubomvu bomhlaba buhlala buwumbala we-lipstick abesifazane abaningi abathanda ukukhetha ukuwusebenzisa namuhla. Ngolwazi olwabiwe mayelana nabaphezulu abangu-6+ umhlaba obomvu lipstick Ithemba lanamuhla elishisa kakhulu lokukusiza ukuthi ukhethe umkhiqizo olungele wena.
Xem Thêm Top 6 Game Phản Xạ Giúp Bạn Rèn Luyện Kỹ Năng Chớp Nhoáng | Muasalebang